व्रत बसेर नाचगान गर्दा प्रेसर, सुगर घट्छः डा. पोखरेल - Health Aawaj -ahealth news portal in Nepal
गृहपृष्ठ ∕ अन्य ∕ व्रत बसेर नाचगान गर्दा प्रेसर, सुगर घट्छः डा. पोखरेल
व्रत बसेर नाचगान गर्दा प्रेसर, सुगर घट्छः डा. पोखरेल
हेल्थ आवाज सोमबार, २०७६ भदौ १६ गते, ११:५० मा प्रकाशित
बुटवल–तराईको गर्मीमा विहानै देखिको लामो लाईनका कारण महिलाहरुको स्वास्थ्यमा गंभिर असर पर्न सक्ने भन्दै डाक्टरले सचेत गराएका छन् । तराईको चर्को घाममा लामो समयसम्म लाईनमा बस्दा प्रेसर कम हुने र नाच्दा सुगर घुट्ने हुँदा बहोस हुने सिद्धार्थ बाल तथा महिला अस्पताल आम्दाका डा.सन्तोष पोखरेल बताउँछन् । ‘नाच्दा एक्ससाइज बढी हुन्छ । भोको पेटमा सुगरको मात्रा कम भैरहेको हुन्छ । पानी समेत नपिउँदा पानीको मात्रा कम हुन जान्छ । जसका कारण बेहोस हुन सक्छन्,’ उनले भने–‘कतिपय अवस्थामा मनोबैज्ञानिक कारणले पनि काम गरिरहेको हुन्छ ।’
व्रत बस्दा फलफूलहरु र पानी पिउदा स्वास्थ्यलाई राम्रो हुने चिकित्सको सुझाव छ । कठोर व्रत स्वास्थ्यका लागि हानिकारक हुने उनीहरुको भनाई छ । यस क्षेत्रका सिद्धवावा, मुक्तिनाथ धाम, मोक्षधाम,दाउन्ने लगायतका शिव मन्दिरहरुमा भत्तजनको विहानै देखि भिड लागेको छ । मन्दिरहरुमा भत्तजनको स्वास्थ्यमा ख्यालराखी लाईनको भने व्यवस्थापन हुन सकेको छैन् ।
खुला बाटोमा लामो लाईनमा भत्तजनहरु लाम्वद्ध भएका छन् । साथै, ठाउँ ठाउँमा बाटो नै छेकेर तीज गितका लागि ठूलो संख्यामा मानिसहरु जम्मा भएका छन् । यसले पनि मानवीय स्वास्थ्यमा प्रभाव पार्ने देखिएको छ । नाज्दा ग्लुकोजको मात्रा कम भई हाइपोग्लाइसेमिया र हिट सिन्कोपका कारणले महिला बिरामी हुने गरेको डा. पोखरेल बताउँछन् । अघिल्लो दिन चिल्लो सहितको दर र अर्को दिन भोकै बस्दा ग्याष्टिकको समस्याले सताउने चिकित्सकहरु बताउँछन् ।
संस्कृतिलाई समय सापेक्ष परिवर्तन गर्दै जानुपर्नेमा विज्ञहरुको सुझाव छ । मानवीय स्वास्थ्यमा प्रतिकुल हुने गरी चाडवाड मनाउन उचित नहुने संस्कृतविदा राजेन्द्र कुमार आचार्य बताउँछन् । ‘हाम्रा कतिपय संस्कारहरु स्वास्थ्यका दृष्टिले अत्यन्तै घातक छन् । ती संस्कारलाई जोगाउँदै स्वास्थ्यमैत्री बनाउन सके राम्रो हुन्छ ।’उनले भने ।